ဝါခေါင်မိုး: May 2011
သမိုင်းထဲက လူတစ်ယောက်အကြောင်း သို့မဟုတ် … ( နောက်ဆုံးပိုင်း)
အမှန်တော့ ၁၉၈၅ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ခမာနီတပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှ တရားဝင် နှုတ်ထွက်ကြောင်းကို ပိုပေါ့ကိုယ်တိုင် ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူဟာ ခမာနီတွေအပေါ် သြဇာရှိပြီး အရေးပါတဲ့ အုပ်ချုပ်သူနေရာမှာ ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့တာပါဘဲ။
သြဇာကြီးလွန်းလှတဲ့ အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များ ဆိုက်ရောက်မလာခင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ Brother No.3ရဲ့ စွန့်ခွာ လက်နက်ချမှုဟာ ကျဆုံးခန်း စတင်ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပိုပေါ့ဟာ အသက် ၇၁ နှစ်ရှိနေပါပြီ။
(ပိုပေါ့ အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ်)
လက်နက်ချပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ Brother No.3ဟာ ခမာနီတွေ ကျူးလွန်ခဲ့သော လူမဆန်စွာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှတဲ့ မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်က အဓိက ကြိုးကိုင် ချယ်လှယ်ခဲ့သူ တရားခံအစစ်ဟာ ပိုပေါ့ဖြစ်ကြောင်းကို ကမ္ဘာသိ ထုတ်ဖေါ်အစစ်ခံပါတော့တယ်။
အဲဒီနောက် ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ သူနဲ့ အနှစ် ၄၀ လောက် လက်တွဲပေါင်းဖေါ်လာခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ခမာနီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဆုန်ဆန်ဟာ ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းတော့မယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆလာခဲ့တဲ့ အတွက် သုတ်သင်ပစ်ရန် ပိုပေါ့က အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆုန်ဆန် တစ်ဦးတည်းကိုသာမဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့ မိသားစု အားလုံးပါ ပိုပေါ့ရဲ့ အမိန့်နဲ့ အသတ်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ရဲ့နောက်မှာတော့ ပိုပေါ့ဟာ ခမာနီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ စစ်ဗျူဟာမှူးဖြစ်သူ တာမော့ (Brother No. 5) ရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပြီး အကျဉ်းစံဘဝ ရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက် ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နေ့မှာ လူထုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ (People’s Tribunal) ကနေ ဆုန်ဆန်ကို သတ်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် တစ်သက် အကျဉ်းကျခံရန် စီရင်ချက်ချခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါဟာ ပိုပေါ့ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များ စတင်ခဲ့ချိန်ပါဘဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ပိုပေါ့ဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လို့ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ပြီး မီးဇာကုန် ဆီခမ်းတဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့လည်း မိုက်လုံးကြီးတဲ့သူဟာ သေတဲ့အထိ မိုက်လုံးကြီးတတ်ကြတယ် ဆိုတာ ဟုတ်များ ဟုတ်မလား မသိပါဘူး။ ပိုပေါ့ဟာ သူသေသွားတဲ့အချိန်ထိ သူ့အပြစ်တွေကို ၀န်မခံသွားခဲ့တဲ့အပြင် သူ့လုပ်ရပ်တွေအားလုံးဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ယုံကြည်သွားခဲ့သူပါ။ သူ့နိုင်ငံနဲ့ လူထုအတွက် သူဟာလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ခဲ့တာပါလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေမှာ ဒါမျိုးကို လုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့လုပ်ရပ်တွေဟာ အမှန်တွေပါဘဲလို့ အခိုင်အမာကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
(Pol Pot was sentenced here)
(ဒါက ကိုက်အနည်းငယ်အကွာမှာရှိတဲ့ ထိုင်း နယ်စပ်ပါ။)
အဲဒီလိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များနဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကတော့ တကယ့်ကို မလှပခဲ့တာပါ။ ပိုပေါ့ဟာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များကို ထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ သိပ်မဝေးလှတဲ့ တောခေါင်ခေါင်က တဲသာသာ အိမ်စုတ်ကလေးရဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အကျဉ်းကျခံရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရ ဘက်ကလည်း ပိုပေါ့ကိုဖမ်းဆီးပြီး နိုင်ငံတကာတရားရုံးကိုတင်ဖို့ စီစဉ်နေကြပါပြီ။ သူ့ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ တာမော့(Brother No. 5) ကလဲ တရားရုံးတင်ဖို့အတွက် ပိုပေါ့ကို အစိုးရထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့် ဆန္ဒရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ပိုပေါ့ဟာ အဲဒီသတင်း ရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်တာကို နားဆင်ပြီးနောက် နာရီအနည်းငယ်အကြာ 15 April 1998 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေပိုင်း (အသက် ၇၃ နှစ်အရွယ်)မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
သူကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာ သူ့အနားမှာ ဘယ်သူမှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကျမှသာ ဇနီးဖြစ်သူက စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုကွယ်လွန်သွားခဲ့မှန်းကို မည်သူမှမသိရှိခဲ့ရပါဘူး။ နှလုံးခုန်ရပ်ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ရကြောင်း ပြောပေမဲ့ အသတ်ခံရတယ်လို့လဲ သံသယရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ကြတော့ပါဘူး။
(ပိုပေါ့ ကွယ်လွန်ကြောင်း ကမ္ဘာကို ဒီဓါတ်ပုံနဲ့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။)
ကြားဖူးတဲ့ ဆိုရိုးတစ်ခုက “He who killsaman isamurderer but kills millions of people isagreat person.” လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီ Great Person ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးလမ်းကတော့ တရားကျဖွယ် သံဝေဂယူဖွယ် ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။ တောခေါင်ခေါင် နယ်စပ်နားက ရွာငယ်ဇနပုဒ်မှာ သရဏဂုံတင်ဖို့ ဘုန်းတော်ကြီးမရှိသလို အသုဘအခမ်းအနားလဲ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ အိမ်စုတ်ကလေးထဲမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ တိတ်တဆိတ် သေဆုံးခဲ့ရပြီး သုံးရက်အကြာမှာ ရုပ်အလောင်းကို တာလပတ်စတစ်ခုနဲ့ပတ်ကာ ရရာ ပျဉ်တိုပျဉ်စများနဲ့ ဖြစ်သလို လုပ်ထားရတဲ့ ခေါင်းတစ်ခုထဲထည့်လို့ စောင်စုတ်လေးတစ်ထည်ကို ခေါင်းတလားပေါ်လွှမ်းပြီး မီးရှို့သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ရပါတယ်။
မီးသင်္ဂြိုဟ်ရန်ထင်းကတော့ အနီးအနားက ကားတာယာဟောင်းများနဲ့ အိမ်စုတ်ကလေးမှာ သူနောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ပရိဘောဂ အဟောင်းများကို စုပုံလို့ ဖြစ်သလိုသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ရတာပါ။ အားလုံးပြာကျသွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီနေရာမှာဘဲ ပြာများကိုစုပုံပြီးမြေပုံသဖွယ် ပြုလုပ်ကာ သစ်သားတိုင်များစိုက်၍ သွပ်ပြားအဟောင်းအနည်းငယ်ကို အမိုးလုပ်ပြီး သူ့အတွက် နောက်ဆုံးလဲလျောင်းရာနေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
(အမှိုက်မီးရှို့သလို ဒီလိုမျိုး သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ရပါတယ်။ အပေါ်က ကြိမ်ကုလားထိုင်ကတော့ ပိုပေါ့ သတင်းထောက်များနဲ့ တွေ့ဆုံတိုင်းမှာ ထိုင်နေကျ ကုလားထိုင် ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။)
(ပိုပေါ့ကို သင်္ဂြိုဟ်စဉ်ကတွေ့ရတဲ့ ဇနီးနဲ့ ၁၄နှစ်အရွယ် သမီးပါ။)
(ထိုင်း border ပုံနဲ့ စီရင်ချက် ချတဲ့နေရာကိုပြတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ပုံ ၂ ပုံက ကိုယ်တိုင်ရိုက်တာပါ။ ကျန်တဲ့ပုံများကတော့ အင်တာနက်က ယူပါတယ်။)
Posted by မအိမ်သူ at 11:45 PM3comments
Posted by မအိမ်သူ at 10:02 PM5comments
Posted by မအိမ်သူ at 9:58 PM3comments
ဒီနေ့တော့ ဘာရယ်မဟုတ် ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း ရောက်တတ်ရာရာ အလ္လာပ္ပ သလ္လာပ္ပလေးတွေ ပြောကြတာပေါ့ ...
မအိမ်သူတို့ဆီကို ဧည့်သည်တွေလာရင် ခဏခဏမေးကြတာက “ ကမ္ဘောဒီးယားမှာ ဘာပေါလဲတဲ့ ...”
မအိမ်သူလဲ ဒီမှာနေလာတာ အတော်လေးကြာနေပြီ ...... ကြာဆို ၉နှစ်လောက် တောင်ရှိနေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့လဲ အဲဒီလိုမျိုး ဘာတွေပေါသလဲ ဆိုတာမျိုး သေချာကြီးတော့လဲ လေ့လာဆန်းစစ် မကြည့်မိပါဘူး။
တကယ်တမ်း ပြောရရင်တော့ ဒီမှာ အားလုံးပေါပါတယ် (လူကိုပြောတာမဟုတ် :P)
နေထိုင်စရိတ်လဲ ပေါတယ်။ စားသောက် စရိတ်လဲ အရမ်းသက်သာတယ်။ ပစ္စည်းတွေလဲ လိုချင်တာဝယ် အကုန်ပေါပါတယ်။
အဲ .. အဲဒီထဲမှာ မအိမ်သူ အထူး သတိထားမိတာ တစ်ခုကတော့ ကမ္ဘောဒီးယားမှာ ပိုးကောင်လို အကောင်ဘလောင်တွေ အတော်ပေါတယ်ဆိုတာပါဘဲ။ အမျိုးကို စုံမှစုံ .... ဘယ်နေရာသွားသွားလဲ ပိုးကောင်အမျိုးအစား အစုံကို ဗန်းတွေနဲ့ အပုံလိုက် ကြော်လှော် ရောင်းနေတာကို တွေ့ရတယ်။
( မြန်မာပြည်မှာဆို ပုရစ်ကြော် လောက်သာတွေ့ဖူးတာကိုး။ )
ဒီမှာကတော့ အစုံဘဲ... တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ ပိုးကောင်မျိုးတွေလဲပါတယ်။ ပုရစ်တောင် အသေးအကြီး ဆိုက်စုံ ကြော်ထားတာဗျိုး ... ပုစဉ်းရင်ကွဲလို နှံကောင်လို နောက်ချေးပိုးလို အကောင်မျိုးတွေလဲပါရဲ့ ။
နေဦး နောက်တစ်ခါ အပြင်သွားရင်တွေ့မှ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်ပေးအုံးမယ်။
မအိမ်သူတို့အိမ်မှာကတော့ မီးပိုးကောင်လို ပိုးကောင်သေးသေးလေးတွေ အရမ်းပေါပါတယ်။ ညရောက်လို့ မီးထွန်းပြီဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာဆို ဓါတ်တိုင်တွေမှာ ကျတတ်တဲ့ ဘေးတိုက်ကလေးတွေ သွားတဲ့ ပိုးစိမ်းကောင်လေးတွေလို .. နောက်ပြီး Moth လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးဖလံကောင်လေးတွေ အကြီးအသေး ပုံစံအမျိုးမျိုး .. နောက် ပလူကောင်တွေ တခြားမီးပိုး သေးသေးလေးတွေ ညတိုင်း တစ်ညတစ်မျိုး မရိုးရအောင် လာပါတယ်။ အဲဒါ ၁၂ ရာသီပါဘဲ။ အဲဒီတော့ အဲဒီလို အကောင်မျိုးလေးတွေကို စားသောက်တတ်သော သတ္တဝါများလဲ မအိမ်သူတို့အိမ်မှာ အလွန်အင်မတန်မှကို ပေါပါတယ်။ အောက်ကပုံတွေသာ ကြည့်ပါတော့ ...
ဒါက အိမ်မြှောင်တွေ ...
အိမ်မြှောင်ကတော့ ပေါမှပေါ ... အခုရိုက်ထားတာ နည်းနည်းလေးဘဲရှိသေးတယ်။
သူတို့လဲ ပေါသလားမမေးနဲ့။ တစ်သားပြီး တစ်သားပေါက်နေတာ။ အိမ်မှာ တောက်တဲ့ မိသားစု ၂ စု လောက်ရှိတယ် (အကြီး အသေး ဆိုက်စုံ ) ပလူတွေဘာတွေများ ကျပြီလားဆို ကြမ်းပြင်ပေါ်အထိ ဆင်းပြီးတော့ အကောင်တွေလာဖမ်းစားကြတာ။
ဒါကတော့ နည်းနည်း ငယ်သေးတယ်။ ဘေဘီတောက်တဲ့ .. အနီးကပ်ရိုက်ထားလို့ အပေါ်ကကောင်တွေနဲ့ သိပ်မကွာသလို ဖြစ်နေတာ။ အိမ်မြှောင်ထက် နည်းနည်းဘဲကြီးတယ်။
လူကြီးတွေပြောတာတော့ အိမ်မှာ တောက်တဲ့ရှိရင် လာဘ်ကောင်းတယ်ဆိုလား ..... ဒီတောက်တဲ့တွေ အိမ်မှာရှိသလောက်သာ လာဘ်ကောင်းရရင်တော့ မအိမ်သူတို့လဲ ဘီလျံနာဖြစ်တာကြာပေါ့... :(
Posted by မအိမ်သူ at 9:48 PM5comments
Posted by မအိမ်သူ at 9:59 AM2comments
(ပုံကို Google မှယူပါသည်။)
လင်းလက်တဲ့ကြယ်တွေရဲ့အောက်မှာ ချိုမြတဲ့နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ ထိခတ်ခဲ့ကြတယ်။
ပန်းဥယျာဉ်ထဲက မင်းရဲ့အပွေ့အဖက်က ငါ့အတွက် အဓိပ္ပÜါယ်အများကြီး ပြည့်ဝစေခဲ့တယ်။
တို့နှလုံးသားတွေ ခိုဖြူတွေလို ညည်းတွားတဲ့ည
မင်းရဲ့မျက်ဝန်းတွေ လင်းလက်တဲ့စိန်တစ်ပွင့်လို တဖြတ်ဖြတ်လက်တဲ့ည
အချစ်ရေ… ငါမင်းကို အစွမ်းကုန်ချစ်တယ်ကွယ်…..။
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဂရုစိုက်ကြင်နာခြင်းတွေ ရခဲ့တဲ့ည
အချစ်ရေ… ကိုယ်တို့အတွက် အဲဒီညကို ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ်ကွဲ့…။ ။
Lamar Cole ရဲ့ "The Night Was Made For Romance" ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကဗျာလေးကို ဖတ်ရှု ခံစားပြီး ဆီလျော်သလို ဘာသာပြန် ရေးဖွဲ့ပါတယ်။ ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ မကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက် အမှားအယွင်းများရှိမှာပါဘဲ။ အဲဒီလို ချို့ယွင်းချက်များအတွက် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။
Posted by မအိမ်သူ at 12:36 AM 1 comments
ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက် လူ့ပြည်မှာမွေးဖွားလာရင် အူဝဲသံတညံညံ ဟစ်ကြွေးလို့ လောကကြီးကို နှုတ်ဆက်သလို အခု “ဝါခေါင်မိုး” ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတစ်ခု ဘလော့ဂ်ပြည်ကြီးထဲမှာ မွေးဖွားလာတဲ့အတွက် အားလုံးကို “မင်္ဂလာပါ”လို့ နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။
ဝါခေါင်မိုးလေးဟာ အခုမှမွေးဖွားလာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာဖို့ကို အများကြီး ပြုစု စောင့်ရှောက် ရအုံးမှာပါ။
ဘလော့ဂ် လောကကြီးထဲမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းနေကြပြီဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ် အကိုအမများရဲ့ အားပေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ လက်တွဲ ခေါ်ယူမှုဟာ ဝါခေါင်မိုးလေးအတွက် အားဆေးတစ်ခွက် ရေချိုတစ်စက်ဖြစ်မှာပါရှင် .....
Posted by မအိမ်သူ at 3:28 PM3comments